css ကို sprite များ
CSS ကို sprite များနမူနာလာမယ့်
ဇူလိုင်လ 9, 2009 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု3comments
လာမယ့်ဗားရှင်း, လာမယ့်သီတင်းပတ်ကုန်မှာလာမယ့်ထားတဲ့အလံ widget သည် css sprite များနမူနာများအတွက်အထောက်အပံ့ကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်. ဤသည်အမြန်နှုန်းနှင့်ဝက်ဘ်ဆာဗာကိုဖန်ဆင်းတောင်းဆိုမှုများအရေအတွက်၏ဝေါဟာရများအတွက်အားသာချက်များရှိသည်. code ကိုပြီးသားဒီ site ပေါ်တွင် active ဖြစ်ပြီးငါတို့ကိုသင် client ကိုဘက်မှာကြုံတွေ့ရမည်သည့်အရေးကိစ္စများကိုသိစေဖိုးထားတလိမ့်မယ်လို့ (မဟုတ်တဲ့စံ browser များ – IE6, စသည်တို့ကို).
တစ်လှည့်ဖျားသည် code ကိုယူချင်သောမည်သူမဆို, pre-လွှတ်ပေးရန် code ကိုရမှကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ကြိုဆိုထက်ပိုသည်.
အောက်တွင်တင်သွင်း: အထွေထွေမက်ဆေ့ခ်ျများ အတူ Tagged: css ကို sprite များ, အလံ sprite များ